Madaxweynaha Puntland oo qaabilay safiirka Midowga Yurub u qaabilsan Somalia Michael Cevone
Garoowe:-Madaxweynaha Puntland ayaa xarunta Madaxtooyada ee Puntland wuxuu ku qaabilay safiirka Midowga Yurub u qaabilsan Somalia Michael Cevone.Safiirka Midowga Yururub u qaabilsan arimaha Soomaaliya waxaa socdaalkiisa ku weheliyey madaxa barnaamijka Midowga Yurub u qaabilsan Nabadgelyada iyo amaanka Somalia Valentino Auricchio.
Madaxweynaha Puntland C/raxmaan Maxamed faroole ayaa kulanka uu la qaatay safiirka Midowga Yurub u qaabilsan Somalia Michael Cevone waxaa ku weheliyey Madaxweyne ku xigeenka Puntland Jen Cabdisamed Cali Shire wasiirada arrimaha gudaha Jen C/laahi Ila Jiir ,Wasiirka Beeraha ee Puntland Maxamuud Xaaji Saalax ,Wasiirka Hawlaha Guud iyo saraakiil ka tirsan madaxtooyada Puntland .
Safiirka Midowga Yurub u qaabilsan Somalia Michael Cevone Michael Cervone ayaa la hadlay saxaafada markii uu soo idlaaday kulanka waxaana uu sheegay in Midowga Yururb ay ku taageeri doonto DFS iyo dowlad Gobaleedka Puntland dhaqaale si ay wax uga qabtaan Amaanka ,waxbarashada ,,cuntada iyo horumarinta deegaanada .
Safiirka Midowga Yurub u qaabilsan Somalia Michael Cevone ayaa sheegay in ay ugu deeqi doonaan Somalia lacag dhan 158 Malyan oo Doolar
oo 25 kamida ay ku bixi doonto maareynta dhulka daaqsinka ee Puntland.
Madaxweynaha Puntland C/raxmaan Faroole oo la hadlay saxaafada ayaa sheegay in dhaqaalaha ay Midowga Yurub siinayso Somalia la siin doono Puntland in ka badan 50 Malyan si wax looga qabto kaabayaasha dhaqaalaha ee Puntland.
Ugu Danbeyntii Madaxweynaha Puntland C/raxmaan Faroole ayaa u mahad celiyey wafdiga uu hogaaminayo safiirka Midowga Yurub u qaabilsan Somalia Michael Cevone .